Hospital Cubicle Mgbochi
Hospital ndina Linin
Ndidi na onodu eyi
Ire ọkụ Retardancy Standards
Akwa-eji na ọha na eze oghere (gụnyere ọgwụ, nọọsụ ụlọ, ụlọ akwụkwọ, chọọchị dị iche iche, ụlọ mgbakọ, eme ihe nkiri, na ndị ọzọ.) A chọrọ ka gbaara ka ire ọkụ retardant. Mba dị iche iche nwere dị iche iche ụkpụrụ banyere ire ọkụ retardancy.
UK: Bs 5867-2: Flammability ule maka akwa maka ákwà-nkwuba na drapes
The ákwà a na-anwale tupu mgbe nhicha.
A ákwà sample-etinye ekwesị na a metal eku. The metal etiti nwere ihe abụọ n'ihe nrịbama. A oku na-etinyere na-akpa ákwà n'elu maka 10 sekọnd.
Results: The ákwà na-aga a Fr ọkọlọtọ ma ọ bụrụ na:
1) .Okwu mbụ welara na-adịghị gbubiri site bụ ire ọkụ;
2) .Onye ire ọkụ anaghị ọkụ site na n'ọnụ nke metal eku.
The ákwà a na-anwale tupu mgbe nhicha ( 12 cycles nke Bs EN ISO 10528 Standard Ịsa Usoro na 75 ° C na mgbe akara Fikiere).
A ákwà sample-etinye ekwesị na a metal eku. A oku na-etinyere na-akpa ákwà n'elu maka 15 sekọnd.
1) .Okwu ire ọkụ anaghị ọkụ site na n'ọnụ nke metal etiti;
2) .E nweghị ọkụ ụmụ irighiri mmiri.
Type C (kasị elu ọkọlọtọ):
The ákwà a na-anwale tupu mgbe nhicha. ( 50 cycles nke Bs EN ISO 10528 Standard Ịsa Usoro na 75 ° C na mgbe ala okpomọkụ na mgbe idahari Fikiere.)
A ákwà sample-etinye ekwesị na a metal eku. A oku na-etinyere na-akpa ákwà n'elu maka 5 sekọnd, 15 sekọnd, 20 sekọnd na 30 sekọnd.
1) .Okwu mgbe oku na afterglow adịghị gafere 2.5 sekọnd;
2) .Onye ire ọkụ anaghị ọkụ site na n'ọnụ nke metal etiti;
3) .E nweghị ọkụ ụmụ irighiri mmiri.
LONGWAY ire ọkụ retardant ákwà mgbochi ákwà complies na BS5867-2 Type C chọrọ.
NFPA (US National Fire Protection Association) nwere dị iche iche na ụkpụrụ dabere na otú ndị na-akpa ákwà a ga-eji. N'ihe banyere draperies, ákwà-nkwuba, na yiri nghọta textiles, ọkọlọtọ na-emetụta bụ NFPA 701 : Standard Ụzọ nke Fire nwale ire ọkụ Mgbasa nke Textiles na fim.
NFPA 701 Test Method One (adabara akwa erughị 700gsm ma ọ bụ 21oz / square yad ): ụdị na-gụrụ amụnye oku maka 45 sekọnd. Ruo NFPA 701 Test Method One,
1) .Okwu nkezi arọ ọnwụ nke ụdị ga-40% ma ọ bụ obere na
2) .Fragments nke residues nke ụdị na-ada ule ulo agaghi-anọgide na-ọkụ n'ihi na ihe karịrị 2 sekọnd.
NFPA 701 Test Method Abụọ (adabara akwa over700gsm ma ọ bụ 21oz / square yad ): a ire ọkụ na-etinyere n'okpuru ala onu nke gbasirila maka nkeji abụọ na mgbe ahụ napụrụ. Ruo NFPA 701 Test Method Two,
1) .Any gbasirila ghara ịnọgide na-enwu enwu n'ihi na ihe karịrị 2 sekọnd mgbe ule ire ọkụ bụ revmove si na kọntaktị na gbasirila;
2) .Onye Ịsaka ogologo nke ọ bụla otu ewepụghị gbasirila ekwesịghị gafere 435mm (17.1 na); maka apịaji gbasirila 1050mm (43.1 na);
3) .Any òkè ma ọ bụ residues nke ụdị na-atapụsị floorof ule ngwa kwesịrị adịghị anọgide na-ere ọkụ n'ihi na ihe karịrị 2 sekọnd mgbe na-eru n'ala.
Nhicha na Mmiri Leaching usoro : Mgbe a emeputa azọrọ na ákwà retains ya ire ọkụ na-eguzogide ụlọmkposhi ma ọ bụ weathering, ihe ga na-anwale mgbe ọ e doro ikpughe ọnọdụ ndị na ọdabara ya bu n'obi were, akọrọ ihicha (3 cycles) , Laundering (5 cycles) ma ọ bụ ndị ọzọ n'ebe mmiri (kpamkpam mikpuru a arịa mgbata mmiri na ụlọ okpomọkụ na-erughị awa 72).
E wezụga n'elu UK na USA ụkpụrụ, e nwere ụfọdụ ndị ọzọ ụkpụrụ dị iche iche countries.In Europe na Australia, ndị kasị nabatara ụkpụrụ ndị dị na ụlọ ọrụ ndị na-French, German na British ụkpụrụ. Nso nso a, na-na European EN 13773 ọkọlọtọ maka ákwà-nkwuba na-aghọ ndị ọzọ ọsọ.
Post oge: Sep-17-2018
Akwa-eji na ọha na eze oghere (gụnyere ọgwụ, nọọsụ ụlọ, ụlọ akwụkwọ, chọọchị dị iche iche, Audi ...
Dị iche iche nke ire ọkụ Retardancy
Hospital Cubicle Ákwà na-chọrọ ka ire ọkụ retardant (aka ọkụ retardant ma ọ bụ shortened ka ...